၂၀၁၈ ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်းအတွက်ရွှေရွှန်းစေး - PUBG Mobile | Androidsis
PUBG Mobile သည်ယခုနှစ်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်းအဖြစ်ဂုဏ်ယူနေပြီဖြစ်သည် Fortnite: ပင်ခေတ်မှီဂိမ်းကိုအနိုင်ယူရန်။ ၎င်းသည်ကဏ္Jမှအသိအမှတ်ပြုဆုံးသောဆုများထဲမှအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်းဆုအတွက်၎င်း၏ရွှေတံဆိပ်ဆုဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဒုတိယအကြီးဆုံးအခမ်းအနားပဲဆန္ဒမဲအများဆုံးရရှိခဲ့သည်။
၎င်းသည်ကစားခဲ့သည့်နေရာတွင် Fortine ကဲ့သို့သောခေါင်းစဉ်များရှိသည်။ စိုးစံ: Thrones ၏ဂိမ်း, Florence သို့မဟုတ် Donut ကောင်တီ။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာယင်းသည်၎င်း၏အကြီးမြတ်ဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်သည် ၎င်း၏မိုဘိုင်းဗားရှင်း Fortnite ရိုက်တယ် ဒါ့အပြင်မိုဘိုင်းဖုန်းမှာသုံးချင်တဲ့ဆန္ဒကမကောင်းဘူး၊ အထူးသဖြင့်ဘက်ထရီပြandနာနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများမည်သို့အပူရှိန်ရှိသည်တို့အတွက်ဖြစ်သည်။
1 သင်၏မိုဘိုင်းအတွက် PUBG Mobile ကဲ့သို့ဂိမ်းမရှိပါ
2 PUBG Mobile ၏နှစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
သင်၏မိုဘိုင်းအတွက် PUBG Mobile ကဲ့သို့ဂိမ်းမရှိပါ
PUBG Mobile တွင်ရှိသည် တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်းအတွက်ရွှေဂျောစ်ဆုဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်လာရန်အတွက်မှတ်တမ်းအားလုံးကိုချိုးဖျက်သောဂိမ်းတစ်ခု။ မကြာသေးမီကဖွင့်လှစ်ထားသော Tencent Games သည်၎င်းကိုကျော်လွန်သွားပြီဟုကြေငြာခဲ့သည့်အချိန်ကဖြစ်သည် သန်း ၂၀ လစဉ်အသုံးပြုသူ y ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၌သန်း (၁၀၀) ကျော် download လုပ်ခြင်း; ဒါကတရုတ်၊ ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတွေပါ။
ယင်း၏အောင်မြင်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်အခြေခံပြီး စစ်ဆင်ရေးနှင့်ဘက်ထရီများရှိမိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးသောစစ်ဆင်ရေးဖြစ်သည်, အကြောင်းအရာသစ်ကိုဆောင်ကြဉ်းသောပုံမှန်မွမ်းမံမှုများအပေါ်အခြေခံသည်။ ငါတို့ပြောတယ် Sanhok ကဲ့သို့မြေပုံအသစ်အသစ်ဂိမ်း Modes သာ စစ်ဘယ်လိုလဲလက်နက်များ၊ ရာသီဥတုဆိုးကျိုးများ၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများစွာနှင့်အခြားအရာများရှိသည်။ စတင်ပင်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ် aupa ဟယ်လို.
မကြာခင်မှာပဲမနက်ဖြန်အသစ်မှာအသစ်ပြောင်းခြင်းတစ်ခုရတော့မှာပါ ဗားရှင်း 0.9.5 ဖြင့်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စတင်ရိုက်ချက်ကိုပေးလိမ့်မည် အဆိုပါ ရာသီသစ် Royale Pass 4။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်ကုန်ပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးသည့်အခါတိုင်းရိုင်ဖယ်များ၊ မော်တော်ယာဉ်များ၊ အဝတ်အစားများနှင့်လေထီးအသစ်များအတွက်အရေခွံများတွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ရမှတ်များရရှိမည်ဖြစ်သောနေ့စဉ်နှင့်အပတ်စဉ်မစ်ရှင်အသစ်များကိုသင်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
PUBG Mobile ၏နှစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
PUBG Mobile သည်စစ်မြေပြင်ကစားပွဲဖြစ်ပြီးကစားသမား ၁၀၀ အထိကစားနိုင်သည်။ ဒီနံပါတ်ကလက်ရှိကန့်သတ်ပေမယ့်ဟုတ်ကဲ့ အသစ်သောအမာခံ mode ကိုမနက်ဖြန်လာလိမ့်မည် အားလုံးကစားသမားအစစ်အမှန်ကလူဖြစ်ကြ၏ဘယ်မှာယခုကတည်းကအချို့ bot များဖြစ်ကြသည်။
ကြောင်းဂိမ်းတစ်ခု 3D ၌အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးအပြည့်အဝဗားရှင်းဖြစ်ရန်လုံလောက်စွာအသုံးချခဲ့သည် PC ပေါ်တွင် PUBG ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လက်နက်များ၊ မော်တော်ယာဉ်များနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများရှာဖွေရန်နှင့်သင်၏လမ်းပေါ်တွင်သင်ကြုံတွေ့ရသောမည်သည့်ကစားသမားကိုမဆိုရိုက်နှက်ရန်လိုအပ်သည်။ မင်းဒီမှာရှိတယ် ရှင်သန်ရန်ကောင်းသောလမ်းညွှန် PUBG မိုဘိုင်းပေါ်တွင်။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုတစ် ဦး နှင့်အတူဝါရင့် အရွယ်အစားလျှော့ချခံရဖို့theရိယာများအတွက်အချိန်ကန့်သတ် ဂိမ်းဖြစ်စဉ်များအဖြစ်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာစစ်မြေပြင်၌နောက်ဆုံးဖြစ်ရန်သို့မဟုတ်သင်၏အသင်းဖော်နှင့်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးစက်ဝိုင်းရရန်သင့်အားအခြားလမ်းညွှန်ထားခဲ့ပါ နှင့်ကြက်သားညစာစားပွဲအနိုင်ရ။
ဂိမ်းအဆုံး၌သင်ရမှတ် သင်သည်သင်၏ဒေသ၏အဆင့်အတွက်အမှတ်တက်ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် သို့မှသာသင်သည်ဆုရရန်ခွင့်ပြုမည့်ကွဲပြားသော "Tiers" ကို ဖြတ်၍ သွားပါ။ ဤအမျိုးအစားခွဲခြားထားခြင်းကသင်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုရှင်သန်မှု၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ထားရှိရန်အလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသောဂိမ်းများနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရန်သေချာစေသည်။
PUBG Mobile သည်ဤကဲ့သို့သောအဆင့်ကိုရရှိခဲ့သည် ဂိမ်းတစ်ခုစီသည်ကစားသမားများစွာ၏တိုက်ပွဲများနှင့်အတူထူးခြားသည် Pochinki လိုမြို့ကြီးတွေမှာတွေ့နိုင်တယ်၊ နေရာတိုင်းကလာတဲ့ပေါက်ကွဲသံတွေ၊ နေရာတိုင်းကလာတဲ့သေနတ်တွေ၊ ကစားသမားတိုင်းကိုသူတို့ခြေထောက်ပေါ်ကနေဖယ်ထုတ်ပစ်ဖို့မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာသင်တွေ့နိုင်တယ်၊ လူကြိုက်အများဆုံးဒေသအချို့ Chernobyl အားဖြင့်မှုတ်သွင်းနေကြသည်.
၏အကောင်းဆုံးပေမယ့် PUBG Mobile သည်ဂိမ်းကစားခြင်းတွင်ကြီးမားသောခုန်ကျော်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဘက်ထရီနှစ်မျိုးလုံးအတွက်ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်းကြောင့်ဂရပ်ဖစ်အတွက်အကောင်းဆုံးကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါ။ ၎င်းနှင့်အတူသောင်းနှင့်ချီသောကစားသမားများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဆန့်ကျင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည် Golden Joystick နှင့်အတူတစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်းဖြစ်လာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » PUBG Mobile သည် Golden Joystick 2018 ကိုအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်းအဖြစ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်